Tokony ho fantatrao izay sakafo tsara indrindra ho an'ny alikanao | Tontolo alika
Andraikitra lehibe ny fananana alika, satria ireo tsy mila fitiavana fotsiny izy ireofa manana a fahasalamana, sakafo ary fikarakarana tsara. Zava-dehibe tokoa ny sakafo, satria mifototra amin'izany dia ho salama ny alikanao ary na dia misy aza izany karazana marika marika sakafo isan-karazany Ho an'ny alika, ny fihinanana zavatra mitovy dia mety mankaleo ny biby fiompinao.
1 Fa maninona no tsy tsara ny mihinana zavatra mitovy isan'andro?
2 Sakafo lena
3 Sakafo namboarina
3.1 Sakafo manta
Fa maninona no tsy tsara ny mihinana zavatra mitovy isan'andro?
Alao an-tsaina ange fa mihinana zavatra mitovy isan'andro ianao, tsy dia mahaliana loatra izany, sa tsy izany? Eny, ho an'ny alikanao dia tsy izy io ary mety efa marary amin'ny fihinana zavatra mitovy isan'andro ianao. Ovao ny sakafon'ny alikao manao ny andavan'andro ho somary mahaliana kokoa sy miaraka amin'ny sakafo marina, azonao atao ny mamahana ny alikanao nefa tsy manimba ny fahasalamany na ny sakafo voalanjalanja, ka mahasalama sy mahasambatra tanteraka.
Misy karazan-tsakafo marobe ary tsy misy fiatraikany amin'ny alika iray amin'ny fomba mitovy amin'ny fomba hafa. Ohatra, karazana sakafo maina sasany dia mety hiteraka olana ara-pahasalamana amin'ny alika sasany, raha amin'ny iray hafa dia sakafo matsiro sy mahasalama tanteraka. Inona no atao hoe fitaomana? kalitaon'ny sakafo izay atolotrao ny alikanao, satria mifototra amin'izy ireo ny fahasalamany dia ho tsara kokoa na ratsy kokoa ary izany dia hamaritra ny faharetan'ny fiainany.
alika mila vitamina, mineraly ary otrikaina avy amin'ny toerana samy hafa, ary koa mila azy ireo isika, noho izany ny fiovaovan'ny fihinananao dia mety hisy fiantraikany lehibe amin'ny fahasalamanao. Vakio hatrany ity lahatsoratra ity ary fantaro izay sakafo tsara indrindra ho an'ny alikanao!
Sakafo alika maina mety hahasoa be, satria mitazona ny fahasalamany tsara izy ireo ary manitatra ny androm-piainany.
Na izany aza, Ny sakafo mando dia mety amin'ny fitazonana ny toetoetran'ny tonon-taolana ny biby fiompinao. Ka raha manana alika marary na antitra ianao dia mety te hieritreritra ny hanova ny sakafony ary hampifangaro azy amin'ny sakafo lena. Satria miorina amin'ny rano ireo sakafo ireo, dia hihoatra ny rano ny biby anao raha mora maty rano.
Ilaina amin'ny sakafo isan'andro ny sakafo fonosana, fa Ny fiainana azy ireo dia mety hahatonga ny fahasalamantsika hiharatsy. Toy izany koa no mitranga amin'ny alikanao, izay indraindray mila sakafo an-trano vita amin'ny tanan'ny tompony. Ny sakafo an-trano dia misy fanampiny kely kokoa sy karazana vokatra hafa izay mampihena ny ain'ny alikao ary manaratsy ny fahasalamany.
Tahaka ny ataonao amin'ny tenanao sy ny fianakavianao dia tokony hikaroka sy handamina ny sakafo marina mampiroborobo ianao salama tsara ny biby fiompinao, izany no antony tokony hanombohanao mianatra ny fomba fanomanana lovia koa, mba hanana safidy tsara indrindra sy mahasalama indrindra.
Raha nanapa-kevitra ny hanadihady ianao ary hanomboka manomana sakafo any an-trano ho an'ny alikanaoMety nahatsikaritra ianao fa maro ny sakafo manolotra sakafo matavy. Sakafo manta manana tombontsoa ara-pahasalamana maro izy ireo ny alikanao, na dia misy aza ny risika mety hitranga.
Na izany aza, mino ny mpahay siansa sasany fa ny alika dia mbola afaka mandevona hena manta toy ny taloha, ny alika dia nihaza. Na dia marina aza fa tsy ny alika rehetra no manao tsara, dia fanadihadiana maro no milaza izany ny sakafo manta dia misoroka ny fivontosana, ny arthritis, sns..
Tadidio izany tsy maintsy manome legioma ny alikao ianao Ary koa, na dia tsy tokony ho loharanon'ny sakafo manta fotsiny aza izany, satria mety hanjary hihamalemy ny alikanao. Mety hampidi-doza ny hena manta, ka alao antoka fa voadio sy hadio izy io. Na ny sasany aza ny voankazo sy legioma dia mahomby amin'ny fampitomboana ny sakafo mahavelona ny alikanao, na izany aza tadidio fa ireo no karnavora lehibe indrindra eo amin'ny natiora, ka ny sakafo mifototra amin'ireo sakafo ireo ihany no mety hanimba azy ireo.
Raha te hanandrana sakafo manta ianao dia atombohy amin'ny fampihenana tsikelikely ny haavon'ny fandrahoana azy mandra-pahazoanao vokatra farany.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Tontolo alika » Alika ankapobeny » Fahano alika sy alika kely » Fantaro hoe iza no sakafo tsara indrindra ho an'ny alikanao
Tiura dia hoy izy:
Ny olana dia tsy fantatry ny olona izay homena azy ireo na anaovany izany tsy feno, ary manomboka ny fitohanana, fivalanana ary ny tsy fahampiana. Raha mifototra amin'ny sakafo maina maina kalitao ny sakafo ary ampianao amin'ny zavatra azonao omena azy dia izay ihany, fa mitandrema.
Mamaly an'i Tiura
Tombony azo amin'ny fikolokoloana ny alikantsika
Manao ahoana ny bulldog